ရှင်းလင်းချက်ကို တောင်းဆိုခြင်း (အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ) - Myanmar Network
ရှင်းလင်းချက်ကို တောင်းဆိုခြင်း (အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာ)
Posted by Soe Soe Win on April 25, 2013 at 17:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Demanding Explanations (ရှင်းလင်းချက်ကို တောင်းဆိုခြင်း)
တစ်ခါတစ်ရံရှင်းလင်းချက်လိုတဲ့ ကိစ္စလေးများ ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအခါမျိုးကျရင်တော့ သက်ဆိုင်သူကို ရှင်းပြပေးဖို့တောင်းဆိုရပါတော့မယ်။ ဥပမာ သင့်အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာအသစ်တစ်လုံး ၀ယ်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့။ ကွန်ပျူတာမှာ ပြဿနာရှိနေတယ်။ ဆိုင်သွားပြတော့ အရောင်းစာရေးက အာမခံချက် (warranty) ထဲမှာ အဲဒီလိုပြသနာက အကျုံးမ၀င်ဘူးလို့ပြောလာတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို သိချင်တဲ့အတွက် ရှင်းလင်းချက်ကို တောင်းခံတော့မယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ ဒီလိုတောင်း နိုင်တဲ့ အသုံးအနှုန်းများစွာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီအထဲကမှ အသုံးများသော ပုံစံအချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ -
Can you tell me why ---------- (---------- တာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြနိုင်ပါမလား?)
I don’t understand why ---------- (----------တာဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး။)
Can you explain why ---------- (---------- တာဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတာကို ရှင်းပြနိုင်ပါလား?)
Why is it that ---------- (---------- တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။)
How come ---------- (---------- တာဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ?)
Does this mean ---------- (---------- လို့ပြောချင်တာပါလား?)
Do you really expect me to believe ---------- (----------ဆိုတာကို ကျွန်တော် ယုံလိမ့်မယ်လို့ ခင်ဗျား တကယ်မျှော်လင့်နေတာလား?) - တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Can you tell me why it has taken you so long to respond? (အကြောင်းပြန်ဖို့ ဒီလောက် တောင်ကြာနေရတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ပြောပြနိုင်မလား?)
*Can you tell me why ကို ၀ါကျကဏ္ဍ (clause) အပြည့် နှင့်တွဲသုံးရပါမယ်။ သွယ်ဝိုက်သော မေးခွန်း (indirect question) ဖြစ်လို့ သင်္ကေတလိုပါတယ်။
I don’t understand why it has taken you so long to respond. (ခင်ဗျားအနေနဲ့ အကြောင်းပြန်ဖို့ ဒီလောက်တောင် ကြာနေရတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ကျွန်တော် နားမလည်ဘူး။)
*I don’t understand why ကိုလည်း ပြည့်စုံတဲ့ clause နဲ့ တွဲသုံးပါတယ်။ အဆိုဝါကျ (statement) ဖြစ်တဲ့အတွက် သင်္ကေတမလိုပါ။
Can you explain why it has taken you so long to respond? (အကြောင်းပြန်ဖို့အတွက် ဘာ့ကြောင့် ဒီလောက်တောင် ကြာနေရတာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြပေးနိုင်မလား?)
*Can you explain why ကိုလည်း full clause နှင့် တွဲသုံးရပါမယ်။ သွယ်ဝိုက်သော မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် သင်္ကေတကိုလည်း ထည့်ရပါမယ်။
Why is it that it has taken you so long to respond? (အကြောင်းပြန်ဖို့ ဒီလောက်တောင်ကြာနေရ တာ ဘာ့ကြောင့်ပါလဲ?
*Why is it that ကို full clause နဲ့ တွဲသုံးပြီး သွယ်ဝိုက်မေးခွန်းဖြစ်တဲ့အတွက် သင်္ကေတကို ထည့်ရပါတယ်။
How come it has taken you so long to respond? (အကြောင်းပြန်ဖို့ ဒီလောက်တောင် ကြာနေရတာ ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲ?)
*How come ကိုလည်းပဲ full clause နဲ့တွဲသုံးပြီး သင်္ကေတကို ပါထည့်ရပါတယ်။
Does this mean (that) it has taken you so long to respond? (ဒါဆို ခင်ဗျားအကြောင်းပြန်ဖို့ ဒီလောက်တောင်ကြာရတယ်လို့ ပြောချင်တာပါလား?)
*Does this mean ကို full clause နဲ့ တွဲသုံးပါ။ သင်္ကေတလည်း ထည့်ရပါမယ်။
Do you expect me to believe you weren’t able to finish on time? (ခင်ဗျားအချိန်မီ မပြီးနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတာကို ကျွန်တော့်ကို ယုံဖို့ မျှော်လင့်နေတာလား?)
*Do you (really) expect me to believe (that) + full clause ပုံစံပါပဲ။ သင်္ကေတကိုလည်း ထည့်ရပါမယ်။
Demanding Explanations (ရှငျးလငျးခကျြကို တောငျးဆိုခွငျး)
တဈခါတဈရံရှငျးလငျးခကျြလိုတဲ့ ကိစ်စလေးမြား ရှိတတျပါတယျ။ အဲဒီလိုအခါမြိုးကရြငျတော့ သကျဆိုငျသူကို ရှငျးပွပေးဖို့တောငျးဆိုရပါတော့မယျ။ ဥပမာ သငျ့အနနေဲ့ ကှနျပြူတာအသဈတဈလုံး ၀ယျခဲ့တယျဆိုပါစို့။ ကှနျပြူတာမှာ ပွဿနာရှိနတေယျ။ ဆိုငျသှားပွတော့ အရောငျးစာရေးက အာမခံခကျြ (warranty) ထဲမှာ အဲဒီလိုပွသနာက အကြုံးမ၀ငျဘူးလို့ပွောလာတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ ဒါဟာ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတာကို သိခငျြတဲ့အတှကျ ရှငျးလငျးခကျြကို တောငျးခံတော့မယျ။ အင်ျဂလိပျစကားမှာတော့ ဒီလိုတောငျး နိုငျတဲ့ အသုံးအနှုနျးမြားစှာ ရှိပါတယျ။ အဲဒီအထဲကမှ အသုံးမြားသော ပုံစံအခြို့ကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့ -
Can you tell me why ---------- (---------- တာဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကို ပွောပွနိုငျပါမလား?)
I don’t understand why ---------- (----------တာဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတာကို ကြှနျတျော နားမလညျဘူး။)
Can you explain why ---------- (---------- တာဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတာကို ရှငျးပွနိုငျပါလား?)
Why is it that ---------- (---------- တာ ဘာကွောငျ့ပါလဲ။)
How come ---------- (---------- တာဘယျလိုကွောငျ့ပါလဲ?)
Does this mean ---------- (---------- လို့ပွောခငျြတာပါလား?)
Do you really expect me to believe ---------- (----------ဆိုတာကို ကြှနျတျော ယုံလိမျ့မယျလို့ ခငျဗြား တကယျမြှျောလငျ့နတောလား?) - တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Can you tell me why it has taken you so long to respond? (အကွောငျးပွနျဖို့ ဒီလောကျ တောငျကွာနရေတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကို ပွောပွနိုငျမလား?)
*Can you tell me why ကို ဝါကကြဏ်ဏ္ဍ (clause) အပွညျ့ နှငျ့တှဲသုံးရပါမယျ။ သှယျဝိုကျသော မေးခှနျး (indirect question) ဖွဈလို့ သငေ်ျကတလိုပါတယျ။
I don’t understand why it has taken you so long to respond. (ခငျဗြားအနနေဲ့ အကွောငျးပွနျဖို့ ဒီလောကျတောငျ ကွာနရေတာ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတာကို ကြှနျတျော နားမလညျဘူး။)
*I don’t understand why ကိုလညျး ပွညျ့စုံတဲ့ clause နဲ့ တှဲသုံးပါတယျ။ အဆိုဝါကြ (statement) ဖွဈတဲ့အတှကျ သငေ်ျကတမလိုပါ။
Can you explain why it has taken you so long to respond? (အကွောငျးပွနျဖို့အတှကျ ဘာ့ကွောငျ့ ဒီလောကျတောငျ ကွာနရေတာ ဘာကွောငျ့လဲ ဆိုတာကို ရှငျးပွပေးနိုငျမလား?)
*Can you explain why ကိုလညျး full clause နှငျ့ တှဲသုံးရပါမယျ။ သှယျဝိုကျသော မေးခှနျးဖွဈတဲ့အတှကျ သငေ်ျကတကိုလညျး ထညျ့ရပါမယျ။
Why is it that it has taken you so long to respond? (အကွောငျးပွနျဖို့ ဒီလောကျတောငျကွာနရေ တာ ဘာ့ကွောငျ့ပါလဲ?
*Why is it that ကို full clause နဲ့ တှဲသုံးပွီး သှယျဝိုကျမေးခှနျးဖွဈတဲ့အတှကျ သငေ်ျကတကို ထညျ့ရပါတယျ။
How come it has taken you so long to respond? (အကွောငျးပွနျဖို့ ဒီလောကျတောငျ ကွာနရေတာ ဘယျလိုကွောငျ့ပါလဲ?)
*How come ကိုလညျးပဲ full clause နဲ့တှဲသုံးပွီး သငေ်ျကတကို ပါထညျ့ရပါတယျ။
Does this mean (that) it has taken you so long to respond? (ဒါဆို ခငျဗြားအကွောငျးပွနျဖို့ ဒီလောကျတောငျကွာရတယျလို့ ပွောခငျြတာပါလား?)
*Does this mean ကို full clause နဲ့ တှဲသုံးပါ။ သငေ်ျကတလညျး ထညျ့ရပါမယျ။
Do you expect me to believe you weren’t able to finish on time? (ခငျဗြားအခြိနျမီ မပွီးနိုငျခဲ့ဘူးဆိုတာကို ကြှနျတေျာ့ကို ယုံဖို့ မြှျောလငျ့နတောလား?)
*Do you (really) expect me to believe (that) + full clause ပုံစံပါပဲ။ သငေ်ျကတကိုလညျး ထညျ့ရပါမယျ။
Permalink Reply by ဟောက်ရှမ်း... on May 3, 2013 at 15:52
Permalink Reply by Mya Mya Thin on May 3, 2013 at 16:30
Permalink Reply by thomas minnvo on May 3, 2013 at 18:08
Permalink Reply by November Aye on May 4, 2013 at 8:42
Permalink Reply by meemaythu on May 4, 2013 at 11:58
can နေရာမှာ could ကိုသုံးလို့ရလားမသိဘူး။
Permalink Reply by Sue Sha Htet Myat on June 1, 2013 at 17:13
could = နိုင်ခဲ့တာလေ.......ရှင်းပြနိုင်မလားလို့မေးတာဆိုတော့.......နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မရဘူးထင်တယ်
Permalink Reply by Tun Tun Win on September 6, 2013 at 9:37
I think that you can also use "could" asapolite way. But i might be wrong.
Permalink Reply by sikedeveechan on May 4, 2013 at 17:01
Permalink Reply by thanthansoe on May 5, 2013 at 11:57
Permalink Reply by Ko Gyi Kyaw89 on May 10, 2013 at 13:49
Permalink Reply by thanthansoe on May 11, 2013 at 11:24
Permalink Reply by Ngreim Hsu Wai on May 11, 2013 at 14:42